प्रहरीले नै बलात्कार गरे दुई किशोरीलाई, प्रहरी पक्राउ « MNTVONLINE.COM
प्रहरीले नै बलात्कार गरे दुई किशोरीलाई, प्रहरी पक्राउ
सडकमा कोही असहाय बालिकाहरु भेटियो भने तिनलाई हामी के गर्छौं ? पक्कै पनि हामी सहयोग गर्दछौं । अझ प्रहरीले के गर्ला ? प्रहरीले त सहयोग मात्र होइन उनीहरुको सुरक्षा पनि गर्दै सम्बन्धित ठाउँमा पुर्याईदिनेछ । तर, पनौतीको सडकमा यस्तो भएन । सिविन बालिका शान्तिगृहबाट भागेका १५ र १७ वर्षाया किशोरीलाई खुल्ला चौरमा नै बलात्कार गरे । यसरी बलात्कार गर्नेहरु थिए हवल्दार शम्भु राउत र प्रहरी जवान श्रीराम साह । काभ्रे प्रहरीले निजहरुलाई हिरासतमा लिइसकेको छ ।
देशका विभिन्न भागबाट, साथै सडकमा पनि अलपत्र भएका, द्वन्द्वका क्रममा पिल्सिएका, आमाबाबु नभएका बालिकाहरुलाई यहाँ सिविनले राख्ने गरेको छ । तर, उनीहमध्ये केही त्यहाँको अनुशासनबाट डराएर भाग्दछन् । यस्तैमध्ये थिए तीनजना किशोरी । उनीहरु मध्यरातमा भागे । तर, कहाँ जाने थाहा थिएन । जब बसपार्क छेउ दुई प्रहरीले उनीहरुलाई भेटे तब सोधपुछ गर्न थाले । उनीहरुले काठमाडौं जान लागेको बताएका थिए । यसपछि कहाँ जान पाइन्छ, पक्राउ गरिन्छ, थुनिदिन्छु भन्दै प्रहरीले डर देखाए । यसपछि उनीहरुले जे गरेपनि गर्नुस् तर पक्राउ नगर्नुस् भनेपछि प्रहरीको तेस्रो नेत्र खुल्यो । उनीहरुले नजिकैको खुला चौरमा लगेर बलात्कार गरे । यसमध्ये एकजना किशोरी भने भागिन् । दुईजनाले दुईजनालाई बलात्कार गरे । र, त्यहाँबाट जान दिए । यसपछि उनीहरुलाई सिविनले खोज्दै जाँदा ठमेलबाट फेला पारेर फिर्ता ल्यायो । सोधपुछको क्रममा उनीहरुले सबै कुरा भने । यस विषयमा काभ्रे प्रहरी उपरीक्षक पूजा सिंहले भनिन्, आज आइतबार करणी मुद्दामा म्याद थप गरिनेछ । र, कारवाही अघि बढ्नेछ । रक्षक नै भक्षक भएको यो घटनाले पूरै प्रहरी संगठन लज्जामा डुबेको छ ।
इट्टालाई सुन भनेर बिक्री गर्ने ५ जना पक्राउ
जंगलको झाडीमा लगी महिलालाई बलात्कार गर्ने जुठे पक्राउ
रुपन्देहीमा ५९ वर्षीय पुरुषले गरे १२ वर्षीया बालिका बलात्कार
७ वर्षपछि अर्की पीडित युवतीले मुख खोलिन्: प्रिन्सिपलबाटै दुई वर्षसम्म बलात्कृत भएँ